တီအာဝိုင် : August 2013
ဘာသာပြန် ဟာသ ဝတ္ထုတိုများ
Posted by Nan Shin at 7:51 PM No comments:
ငါ့ မှာ အိမ်ထောင်ရှိတယ်
Posted by Nan Shin at 5:09 PM No comments:
Posted by Nan Shin at 6:50 PM No comments:
Posted by Nan Shin at 2:59 PM No comments:
Posted by Nan Shin at 2:43 PM No comments:
Posted by Nan Shin at 3:57 PM No comments:
မျက်မမြင်ဘဝကို ရရှိထားလို့ သူ့ ကိုသူ မုန်းတီးနေတဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ရှိ တယ်။သူ့ က သူ့ ကိုယ် သူတင် မုန်းတာမဟုတ်ဘူး။သူအရမ်းချစ်တဲ့ သူ့ ချစ်သူကောင်း လေးကလွဲပြီး တစ်လောကလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတွေ အားလုံးကို မုန်းတာ။သူ့ ကောင်လေးက သူ့ အနားက တစ်ဖဝါးမှ မခွါပဲသူ့ ကိုပြု စုပေးနေတာလေ။တစ်နေ့ မှာ’’ကောင်လေးရယ် ငါသာမျက်စိပြန်မြင်ခဲ့ရင် နင့်ကိုပဲ လက်ထပ်မှာ သိလား.’’. လို့ ကောင်းလေးကို ပြော လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကောင်မလေးအတွက် မျက်စိနှစ်လုံးစလုံးလှူမဲ့ အလှူရှင်ပေါ် လာပြီး သူ့ ရဲ့ မျက်စိတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်။သူ အရာအားလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ သူ့ ချစ်သူကောင်လေးကို အရင်ဆုံး ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးက မျက်မ မြင်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကောင်းလေးက သူ့ ကိုမေးတယ်။
‘’ကောင်မလေး မင်းအခု ငါအပါအဝင် အရာအာလုံးကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိသွားပြီးဆိုတော့ငါ့ ကို လက်ထပ်တော့မှာပေါ့နော်’ ’ကောင်မလေးက ခါခါးတူးတူးငြင်းတယ်။
‘’ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း နင်လဲ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ပဲ ဆိုတော့ ငါနင့် ကို လုံးမလက်မ ထပ်နိုင်ဘူး’’ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုရင်းသူ့ အနားကထွက်ခွာ သွားခဲ့တယ် ။ကောင်မလေး အတွက် စာလေးတစ်ဆောင်လဲ ရေးပေးထားခဲ့တယ်‘’ကောင်မလေး ငါ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်လိုက်ပါနော်’’
ဒါဟာလူတွေရဲ့ အခြေနေအပြောင်းအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေပြောင်းလဲ တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုပါ။ဘဝမမေ့တတ် တဲ့ လူဆိုတာ သိပ်ကိုရှားပါတယ်။ ဘဝဆိုတာ လှပပြီးကြည်နူးဆွဲမက်ဖွယ် လက်ဆောင်တစ်ခုပါ အကြင်နာမဲ့ပြီး ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့စကားလုံး တစ်လုံးကို မပြောဆိုခင်….. စကားမပြောနိုင်သူတွေကို သတိရပါ။ စားနေရတဲ့ အစားအသောက်ရဲ့အရသာညံ့ဖျင်းမှုကို အပြစ်တင်မပြောဆိုခင်…. စားစရာမရှိတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်ကိုအပြစ်တင်မပြောဆိုခင်…… ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်တစ်ယောက် ရဖို့ ဘုရားသခင်ထံမှာ ငိုယိုပြီးတောင်းဆို နေကြသူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ်ရထားတဲ့ဘဝကို ကိုယ်တိုင်အပြစ် ပြန်မမြင်ခင်……. စောစောစီးစီး ဆုံးပါးသွားကြတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီး ကလေးငယ်တွေကို အပြစ်မတင်ခင်……. သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကလေး မရနိုင်လို့ ပြင်းပြင်းပြပြ ကလေးရချင်နေသူတွေကိုသတိရပါ။ ကိုယ်နေမဲ့အိမ်ဟာ သန့် ရှင်းမှု မရှိလို့ ၊ညစ်ပေနေလို့ ၊တံမျက်စည်းလှည်းမည့်သူ မရှိလိုဆိုပြီး ဂျီးများ ပြစ်တင်မှုတွေမပြုခင်……….. အိမ်ခြေရာမဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်လျှောက်သွားနေရတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ခရီးရှည် ကားမောင်း ထွက်ခွါရမှာကို မညည်းညူခင်……………. ကားမရှိလို့ ခရီးဝေးကို ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်နေရသူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကို ငြီးငွေ့ ပြစ်တင်မှုမပြုခင်………… အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊ မသန်စွမ်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူတွေ၊ကိုယ့်အလုပ်ကို အားကျ နေသူတွေကို သတိရပါ။ သူတပါးရဲ့ ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှုကို လက်ညှိူးကောက်ကောက်ထိုးပြီး အပြစ်မတင်ခင်…. လောကမှာ အမှားကင်းတဲ့သူရှိသလား..ငါကိုယ်တိုင်ရော အမှားကင်းသူ ဖြစ်ရဲ့ လားဆို တာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘဝမှာ စိတ်ပျက်ငြီးငွေစရာတွေ စိတ်ဓါတ်ကျစရာတွေ ကို တွေ့ ကြုံမိမယ် ဆိုရင် တောင် ပြုံြး ဖစ်အောင်တော့ ပြုံးလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့ ကံကြမ္မာက ကျွန်တော်တို့ ကို အခုချိန်ထိ အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထား သေးတယ် မဟုတ်လား။ ဘဝဆိုတာ အရောင်စုံ အရသာစုံ နဲ့ မြတ်နိုးစွဲမက်ဖွယ် လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒိဘဝထဲကို ရဲရဲကြီး ရူးသွပ်နစ်ဝင် လိုက်ပါ။ ပျော်ပျော်ကြီးခံစားလိုက်ပါ။ ဘဝကို ရရှိခြင်းအထိန်းအမှတ် အားပါးတရ ထ ကလိုက်ပါ။ ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ယူပြီး ပီတိသောမနဿတွေ ဖြစ်လိုက်စမ်းပါ။
Posted by Nan Shin at 6:54 PM No comments:
မင်းနဲ့ အဝေးဆုံးတစ်နေရာမှာ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကြော်ဇော်ခြင်းတွေနဲ့ ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ နေမင်း ကြီးတစ်ဆူမဖြစ်ချင်ပါဘူး။အရှေ့ အနောက်တွေကွာခြားပြီး နေ့ ညတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုတွေကြောင့် အလွမ်း အဆွေးဆိုတဲ့ သောကတွေကို ဆက်မထမ်းထားချင်တော့ဘူးချစ်သူ။မင်းနဲ့ သာ အနီးဆုံးနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့ဖိနပ်တိုက်အစေပါးလေးပဲဖြစ်ရဖြစ်ရ အနီးဆုံးမှာပဲ နေပါရစေချစ်သူ။
Posted by Nan Shin at 2:10 PM No comments:
ကျွန်တော့်ရဲ့ အမေဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းနေတယ်။ကျွန်တော်သူ့ ကို အရမ်းမုန်းတာပဲ။သူက ကျွန် တော့် အတွက် အမြဲတန်းအရှက်ရစေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ကျွန်တော် တို့ မိသားစု ကို ထောက်ပံ့ဖို့ အတွက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ တစ်နေ့ မှာ အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်း တက်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ဆီကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ဆိုပြီး သူလာခဲ့တယ်။ ကျွန်နော်အရမ်းကို ရှက်တာပဲ။ သူကျွန်တော့်ကို အဲ့သလိုလာလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ? ကျွန်တော်သူ့ ကိုသိပ်မုန်းတယ်ဆိုတာကို သိသာစေ မဲ့ အကြည့်နဲ့ငြင်းလွှတ်လိုက်ပြီး သူနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်လာလိုက်တယ်။နောက်နေ့ မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျောင်းနေဘက်ကောင်လေးတစ်ယောက်က ‘’ဟား..ဟား..မင်းအမေက မျက်လုံးတစ်လုံးပဲ ရှိတယ် ဟား ဟား..’’ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို လှောင်ပြောင်သရော်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့် လဲ မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုဟ်ပြစ် လိုက်ချင် သလို ကျွန်တော့ အမေကိုလဲ ဒီကမ္ဘာလောကကြီး ထဲကနေ ပျောက်ကွယ် သွားစေချင်တယ်။အဲ့ဒိနေ့ မှာ ကျွန်တော် သူ့ ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး ‘’ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်ကို အလှောင်ခံသူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သက်သက်လုပ်နေတာ မဟုတ်လား၊ ခင်ဗျားကြီး ဘာကြောင့် ခုချိန်ထိ မသေနိုင်သေးတာလဲ’’ လို့ ပြောချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အမေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ အတော်ကို စိတ်တိုနေတဲ့အတွက် တစ်စက္ကန့် တောင်မနားပဲ တရစက်ပြောချပြစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူ့ အပေါ်ထားရှိတဲ့ ဒေါသခံစားချက် အရမ်းကို သိသာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်သူရှိတဲ့အိမ်ကနေ အပြီးအပိုင်ထွက်သွားပြစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူပတ်သက်စရာဘာ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ စာကို အသဲအသန် ဇွဲနပဲ ကြီးကြီးနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိအတွက် နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ အခွင့်ရေးပါရခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးလဲ ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကလေး တစ်ယောက်လည်း ရပြီးဆိုတော့ ကျနော့်ဘဝဟာ ပြီးပြည့်စုံဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဘဝဟာ သိပ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်နေ့ မှာ ကျွန်တော့်အမေ ကျွန်တော့်ဆီ အလည် လာခဲ့တယ်။ သူဟာ ကျွန်တော်နဲ့ မတွေ့ တာကြာပြီဖြစ်သလို့ သူ့ မြေးလေးကိုဆိုရင် မြင်တောင်မမြင်ဖူးသေးဘူး။ သူ ကျွန်တော့ အိမ်တခါးဝကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော့်ကလေးက သူ့ ကိုကြည့်ပြီး ရယ်ပါလေရော။ မဖိတ်ကြားပဲ လာလည်တဲ့အတွက် အပေါက်ဝကနေ ဆီးငေါက်တယ်။ ပြီးတော့‘’ဟေ့ ….အဖွားကြီး ခင်ဗျား ကျုပ်အိမ် ဘာလာလုပ်တာလဲ …ကျုပ်ကလေးလန့် မယ် …ကျုပ်အိမ်ထဲက အခုချက်ချင်း ထွက်သွား… လို့ လဲ အော်ထုတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့အသံကိုကြားကြားချင်း ‘’အော် အော်.. ခွင့်လွှတ်ပါကွယ် …အမေ အိမ်မှားပြီးဝင်ခဲ့မိတာပါ’’ လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့် မြင်ကွင်း ထဲကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ တစ်နေ့ကျောင်းသားများပြန်လည်စုံစည်းပွဲအတွက် စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော့ အမျိုး သမီးကို စီးပွားရေး အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရမယ် လို့ ညာပြီး အဲ့ဒိပွဲကိုသွားတက်ခဲ့တယ်။ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အခါ မှာ သိချင်စိတ်တစ်ခု က ပြင်းပြလာလာတာနဲ့ တဲအိုလေး တစ်လုံးထဲကို ဝင်သွားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်း တစ်ယောက်က သူဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောတယ်။ ကျွန်တော် မျက်ရည်တစ်စက်လေးတောင် မကျခဲ့ဘူး။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေတွေက ကျွန်တော့်ကို သူဖတ်စေချင် လို့ ရေးပေးခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်ထုတ်ပေးတယ်။ ‘’ အမေ အချစ်ရဆုံးသားလေး … အမေ မင်းအကြောင်းကိုပဲ အမြဲတန်းတွေး နေမိတယ် သားရယ်…သားအိမ်ကိုရောက်လာပြီး မင်းရဲ့ သား လေး ကို ခြောက်လှန့် မိသလိုဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် သားရယ်…အမေလေ မင်းဒီပွဲကို လာမယ်ဆိုတာကို သိရတော့ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲကွယ်…..ဒါပေမဲ့…သားရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ခွင့် ရဖို့ အတွက် အမေ့မှာ အခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူးသားရယ်…အမေက အိပ်ယာထဲကတောင် မထွက်နိုင် တော့တဲ့ အခြေနေကိုရောက်နေပြီလေ သားရဲ့ …မင်းတဖြည်ဖြည်းကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ မင်ကိုအမြဲတန်း အရှက်ရစေခဲ့တဲ့အတွက် အမေအမြဲတန်း စိတ်မကောင်းဖြစ် ရပါတယ် သားရယ်..အဲ့ဒိအတွက်လဲ တောင်းပန်ပါတယ်သားရယ်…နော်..အမေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ….မင်းမှတ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးသားရဲ့ ..မင်း လူမှန်းမသိ တတ်သေးတဲ့ အရွယ်က ကားတိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် …အဲ့ဒိအတွက် မင်းရဲ့ မျက်စိတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်….အမေတစ်ယောက် အနေနဲ့ မင်းကြီး လာတဲ့အခါမှာ မျက်စိတစ်ဖက်တည်း ဖြစ်နေမှာကို လုံးဝမကြည့် ရက်တာနဲ့ အမေ့မျက်လုံးတစ်လုံးကို ထုတ်ပြီး သားအတွက် ပေးခဲ့တယ် သားရဲ့ ….အမေ့မျက်လုံးနဲ့ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းကို သားမြင်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အမေဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးပါဘူး သားရယ်…..........................
အနှိုင်းမဲ့ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်…. မင်းရဲ့ အမေ ‘’
Posted by Nan Shin at 10:49 AM No comments: